हेभीवेट उम्मेद्वार रहेकाे चितवनमा थपियाे सुरक्षा चुनौति ! – Nepal Journal
हेभीवेट उम्मेद्वार रहेकाे चितवनमा थपियाे सुरक्षा चुनौति !
Posted By: Nepal Journal November 14, 2017 | २८ कार्तिक २०७४, मंगलवार १२:५६
काठमाडौं । रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारमाथि आक्रमणको प्रयास भएसंगै चितवनको सुरक्षालाई पनि वढी ध्यानदिनुपर्ने देखिएको छ । विशिष्ट व्यक्ति, मन्त्री र पार्टीका अध्यक्षहरु नै उम्मेदवार भएपछि चितवनमा सुरक्षा चुनौती बढेको हो पछिल्ला घटनाक्रमसंगै प्रशासनद्धारा चितवनमा पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो । तीनदिन अघि ३ नं प्रदेशका डिआईजीको उपस्थितीमा जिल्लामा सुरक्षा अवस्थाको अवलोकन र निर्देशन हुनुले पनि चितवनलाई संवेदनशील जिल्लाका रुपमा हेरिएको पाइएको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार छन् । त्यस्तै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री बिक्रम पाण्डे दाहालसँगै प्रतिस्पर्धामा छन् । चितवन क्षेत्र नं. २ बाट शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने क्षेत्र नं. १ बाट पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि उम्मेदवार छन् ।
यस्तै पूर्व सांसद एवम् नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल र नेपाली कांग्रेसका जिल्ला अध्यक्ष जीतनारायण श्रेष्ठ पनि उम्मेदवार छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले हालसम्म सामान्य अवस्थामा रहेपनि चितवनमा पछिल्ला दिनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री, वहालवाला मन्त्री, राज्यमन्त्री र पूर्व मन्त्रीले पाउने सुरक्षा व्यवस्थाका अतिरिक्त थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उनले बताए । जिल्लामा सुरक्षा चुनौती महसुस गरिएको भन्दै उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालको घरदैलो कार्यक्रमको समय पूर्व नै त्यस क्षेत्रको अध्ययन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ ।
भिडभाड बढी हुने र कुनै पनि किसिमको घुसपैठ हुनसक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाईएको उहाँले बताउनुभयो । उम्मेदवारमाथि जुत्ता प्रहार हुन सक्ने, गालामा झापड लगाउन सक्ने जस्ता घटना हुन सक्ने भन्दै निगरानी राखिएको छ ।
‘निर्वाचन प्रणाली ‘दुई नम्बरी’ले मात्रै चुनाव लड्ने खालको’
पार्टी एकताबारे प्रचण्ड र नेपालका कुरा मिले, अाेलीसँग किन मिलेन ?
Be the first to comment on "हेभीवेट उम्मेद्वार रहेकाे चितवनमा थपियाे सुरक्षा चुनौति !"